နေရပ်စွန့်ခွာ ဘင်္ဂါလီများအား ပြန်လည် လက်ခံရေးအတွက် ကြားစခန်းများနှင့် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း - Yangon Media Group
နေရပ်စွန့်ခွာ ဘင်္ဂါလီများအား ပြန်လည် လက်ခံရေးအတွက် ကြားစခန်းများနှင့် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း
နေရပ်စွန့်ခွာဘင်္ဂါလီများအား ပြန်လည်လက်ခံနိုင်ရေးအတွက် ပြန်လည်လက်ခံမည့်ကြားစခန်းများ တည်ဆောက်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားပေးမည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ငွေကျပ်သုံးဘီလီယံ သုံးစွဲထားကြောင်း လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဦးစိုးအောင်က ပြောသည်။
မတ် ၁၄ ရက်က ကျင်းပသည့် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း နေရပ်စွန့်ခွာသွား သော ဘင်္ဂါလီများအား ပြန်လည်လက်ခံရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောလုပ်ငန်းများအတွက် ငွေကြေးမည်မျှသုံးစွဲနေခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မိတ္ထီလာမဲဆန္ဒနယ် မှ ဒေါက်တာဦးမောင်သင်း၏ မေးမြန်းချက်အပေါ် ယင်းကဲ့သို့ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ”နေရပ်စွန့်ခွာတွေကို ပြန်လည်လက်ခံဖို့အတွက် ဌာနအနေနဲ့ အကြမ်းဖျင်းပြောရရင် တော့ သုံးဘီလီယံသုံးခဲ့တယ်။ မြေနေရာ ရှင်းလင်းမှုအနေနဲ့ မီးလောင်ပြင်တွေကို ရှင်းတဲ့အခါမှာ မူလရွာတွေဟာ မီးလောင်ထားတဲ့ အတွက် ဒီနေရာတွေကို ပြန်လည်ကျေးရွာ တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ မီးလောင်ကြွင်းကျန် တွေကို ရှင်းလင်းခဲ့ရာမြေနေရာ ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေ၊ ကြားစခန်း တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ နေရာချထားဖို့ တည်ဆောက် ရေးအပိုင်းတွေမှာ အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ထပ်မံဖြေကြားခဲ့သည်။
အစိုးရအနေဖြင့် ကုန်းတွင်းပိုင်းမှ ဝင် ရောက်လာသူများအား တောင်ပြိုလက်ဝဲလက်ခံ ရေးစခန်းတွင်လည်းကောင်း၊ ရေလမ်းမှ ဝင် ရောက်လာသူများအား ငါးခူရလက်ခံရေးစခန်းတွင်လည်းကောင်း၊ ပြန်လည်လက်ခံရေးစခန်းများတွင် တစ်ရက်သာ နေထိုင်ခွင့်ပြုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါစခန်းတစ်ခု၌ တစ်ရက်လျှင် လူ ၁၅ဝ နှင့် ၃ဝဝ အကြား လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူများအတွက် အစားအသောက်နှင့် တစ်ကိုယ် ရေသုံးပစ္စည်းများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ထိုသို့ပြန်လည်နေရာချထားရာတွင် ယခင်နေထိုင်ခဲ့ဖူးသည့်ကျေးရွာများတွင် တည် ဆောက်ဆဲဖြစ်သော လှဖိုးခေါင်ကြားစခန်းများတွင် ပြန်လည်နေရာချကာ ရိက္ခာ၊အသုံး အဆောင်များ ဖြန့်ဝေသွားမည်ဖြစ်ပြီး သက် မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းအပြင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ လမ်းလုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်မီး လုပ်ငန်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံလုပ်ငန်းများ၌ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နေရပ်စွန့်ခွာသူများအား ပြန်လည်လက်ခံရေးနှင့်ပတ်သက်၍ နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်နှင့်အညီ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
နောက်ကွယ်မှ ပယောဂများဖြင့် ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုများကို NLD ပါတီမှ ပြန်လည်တုံ့ပြန်မည်ဟု ဆို
မြန်မာနိုင်ငံကို နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး(ICC)က အရေးယူခွင့်ရှိသလား
ပဲခူးမြို့ အောင်သုခ ဓမ္မရိပ်သာကြီး၏ အဓိပတိ မဟာနယက ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တစန္ဒိမာ မဟာထေရ်မြတ်??
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ စည်းရုံးရေးအတွက် ဒေသအလိုက် အောင်နိုင်ရေး ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းပြီးပြ
မူဆယ်မြို့နှင့် ကျိုင်းတုံမြို့တုိ့၌ ပြစ်ဒဏ်ကျခံပြီး ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့် တရုတ်နိုင်??
ကွန်ဒို ဝယ်ယူသူ နိုင်ငံသားများကို အခွန်လျှော့ပေးရန် ညှိနှိုင်းနေဟုဆို